Haingo ny tongotry ny fandriana - Inona no fanaka azoko apetraka? | Bezzia
Ahoana no handravaka ny tongotry ny fandriana
Susana godoy | 06/01/2022 14:00 | fanaka
Haingo ny tongotry ny fandriana Iray amin'ireo safidy lehibe tokony horaisintsika izany. Satria na dia manan-kery aza ny fanaka sy ny pitsopitsony rehetra, indraindray isika dia afaka manadino toerana manokana izay afaka manampy antsika betsaka amin'ny fandaminana ny efitranontsika.
Misy hevitra maromaro tokony horaisintsika, satria Hiankina amin'ny tsironao na ny fomban'ny efitrano fatorianao manokana izy ireo.. Na izany na tsy izany, raha te hankafy haingo feno sy tany am-boalohany kokoa izay ahafahanao mitahiry ianao, dia aza hadino ny manaraka.
1 Haingo amin'ny vatan-kazo ny solaitrabe
2 mametraka sofa
3 Fivarotana boky eo anilan'ny fandriana
4 Mifidiana banky
5 Miloka amin'ny seza roa
Haingo amin'ny vatan-kazo ny solaitrabe
Io no iray amin'ireo hevitra voalohany tonga ao an-tsaina rehefa mieritreritra ny haingo ny solaitrabe. Ny marina dia noho izany dia tsy maintsy milaza isika fa niova be ny endriny. Na dia mbola Misy modely vintage bebe kokoa ho an'ity faritry ny efitrano fatoriana ity, azonao atao koa ny misafidy ny endriny hafa miaraka amin'ny endrika mahitsizoro kokoa. ary karazana minimalista amin'ny wicker na amin'ny tonony beige, ohatra. Na inona na inona izany, mazava ho azy fa manampy antsika amin'ny fitahirizana izy ireo ary ao anatin'izany no ahafahantsika mitahiry ny zava-drehetra manomboka amin'ny lambam-pandriana ka hatramin'ny pajama raha ilaina izany.
Araka ny fantatsika tsara, ny karazana sofa no isan-karazany indrindra. Noho izany, azo antoka fa misy iray izay tonga lafatra ho an'ity faritry ny efitrano fatoriana ity. Ho an'ity faritra ity dia azonao atao ny misafidy iray misy backrest, izay tsy avo loatra ary misy seza roa. Na dia ireo izay fomba divan dia hita ihany koa. Koa satria tery kokoa sy tonga lafatra izy ireo amin'ny fandravahana ny tongotry ny fandriana tsy misy mavesatra loatra.
Fivarotana boky eo anilan'ny fandriana
Toy izany koa no azonao atao mifidy fanaka mahitsizoro tsy dia avo loatra. Amin'izao fotoana izao noho ireo fanaka modular rehetra ireo dia ho hitantsika tsy misy olana izy ireo. Safidy tonga lafatra ho anao ny manana ny bokinao voalamina tsara. Noho izany, amin'ny alina izay tsy hatorianao, dia tsy maninona ny ho voataonan'ny iray amin'ireo aventure vita printy ireo. Iray amin'ireo fomba tsara indrindra hamelana ny eritreritrao hivezivezy. Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy misafidy ny fanaka misy talantalana ianao ary ao anatiny, ankoatra ireo boky ireo, azonao atao foana ny mametraka tsipiriany haingon-trano amin'ny endrika boaty mba hanohizana ny fitahirizana ny fitaovanao kely indrindra.
Eny, iray ihany koa amin'ireo safidy izay tsy azo avela satria, tsy isalasalana, ho hitantsika amin'ny haingon-trano maro samihafa. Afaka misafidy foana ianao a dabilio tsotra, vita rustic izay hazo foana no tena lehibe. Saingy satria milaza izahay fa misy safidy, dia hahita safidy maro izay ho tianao ianao. Satria azonao atao koa ny mampiasa azy io ho toy ny seza, ho afaka hametraka kiraro, ohatra. Na eo ambaniny, asio harona na boaty izay manohy miloka amin'ny fitahirizana izay tena tiantsika.
Miloka amin'ny seza roa
Na dia marina aza fa ny hevitra momba ny fanaka feno dia tsy voatery ho toy izany foana. Koa satria afaka manao ny haingon-trano amin'ny tanan'ny seza roa, ohatra. Noho izany, afaka mametraka azy ireo amin'ny faran'ny fandriana tsirairay isika fa tsy eo afovoany. Fa ianao ihany no manana ny teny farany! Ankoatr'izay, ny seza dia mety manana ampahany ambony tena mahazo aina, satria mety ho dabilio tsotra izy ireo na mifarana amin'ny karazana ondana mampahazo aina. Araka ny hitanao, ny safidy dia tena isan-karazany ka ny tsirairay amintsika dia hahita ny iray izay mifanaraka indrindra amin'ny ravaka. Iza no tsara indrindra handravaka ny tongotry ny fandriana?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » fanaka » Ahoana no handravaka ny tongotry ny fandriana
Ahoana no hialana amin'ny demotivation asa
Tia sary ve ianao? Ankafizo ireto fampirantiana 6 ireto